Taiko no Tatsujin: Fetiben'ny Rhythm: Vaovao farany! - Lalao
Taiko no Tatsujin: Fetiben'ny Rhythm: Vaovao farany!
Nandritra ny fandefasana Nintendo Direct tamin'ny 9 febroary 2022, nanambara sy naneho endri-javatra vaovao maro ho avy amin'ny Switch atsy ho atsy ny orinasa. Na izany aza, ny iray amin'ireo fanambarana nahavariana indrindra dia ny an'ny Taiko no Tatsujin: Fetiben'ny Rhythm, izay hitan'ny olona maro fa mampisafotofoto. Ny mpankafy ny lalao mifototra amin'ny gadona kosa dia eo an-daniny. Mba avelao aho hamelabelatra.
Rehefa nitsidika an'i Japana voalohany aho tamin'ny taona 2016, dia nisy namana iray nitondra ahy nitety ny iray amin'ireo arcades mahafinaritra maro ao amin'ny firenena. Nisy milina iray misy amponga taiko plastika lehibe roa teo alohany sy amponga bachi napetraka tao anaty harato teo anilan'ny amponga tsirairay no nitsena ahy rehefa nanatona aho. Nanazava ny zavatra nataony izy. Ooh, Taiko no Tatsujin! hoy izy nientanentana. Tena traikefa Japoney izany.
Noho izany dia azonao atao ny mividy controller taiko ho an'ny Nintendo Switch na PlayStation 4 / PlayStation 5 ary ampiasao izany mba hilalao ny dikan-teny console amin'ny lalao. Na dia eo aza ny zava-misy fa tsy dia mahagaga toy ny milalao amin'ny amponga japoney goavam-be, ny milalao ny console taiko controller dia mbola mahafinaritra be. Na ny dikan-teny PlayStation 4 sy Nintendo Switch amin'ny lalao dia fipoahana hilalao na dia tsy manana mpanara-maso aza ianao. Azo alaina ho an'ny iOS ihany koa ny dikan-tsarimihetsika vaovao amin'ny lalao, izay - noheverinao izany - tena mampiala voly.
Jereo koa : Ember Sword Metaverse: Metaverse Epic mba hampandrosoana ny traikefa amin'ny lalao milalao
Taiko no Tatsujin: Fetiben'ny Rhythm amin'ny Nintendo Switch
Ny Nintendo Switch amin'izao fotoana izao dia mitazona ny fanavahana amin'ny fananana lalao Taiko no Tatsujin betsaka indrindra. Drum 'n' Fun!, lalao arcade, dia miavaka amin'ny Drum Session!, lalao PlayStation; samy manana ny tranomboky sy ny endri-javatra, ary samy manana ny tombontsoany manokana. Ny safidy faharoa dia ny fividianana ny Rhythmic Adventure Pack, izay misy fanangonana hira arcade kely kokoa nefa misy koa, araka ny vinavinanao azy, lalao fitsangatsanganana gadona. Ny Drum 'n' Fun!, etsy ankilany, dia efa ho efa-taona teo ho eo, ka izany no tena mampientanentana fa nanambara ny Nintendo fa hisy lalao vaovao, Rhythm Festival, ho tonga ao amin'ny Switch amin'ny 2022.
Amin'ny fanombohana, ny Fetiben'ny Rhythm dia ahitana hira 76, izay mitovy isa amin'ny hiran'i Drum 'n' Fun74 !. Na izany aza, ny Fetiben'ny Rhythm dia hampiditra serivisy famandrihana amin'ny lalao, izay hanome hira fanampiny 500 ho an'ny mpilalao rehefa manomboka ny lalao. Ny vidin'ny serivisy famandrihana dia tsy mbola nambara, fa raha mpikambana ao amin'ny fandom Taiko no Tatsujin ianao, dia mety ho sahiran-tsaina ianao. Ary, eny, kely dia kely io vondrom-piarahamonina io, farafaharatsiny raha jerena ny isa ao Etazonia. Faly kosa isika.
Jereo koa : Pokémon Legends Arceus, lohatenin'ny fahavelomana efa nandrasana hatry ny ela ho an'ny Nintendo Switch, navoaka tamin'ny 28 Janoary!
Ho fanampin'izay, ny Fetiben'ny Rhythm dia mampiditra fomba vaovao sasany izay toa manindrona zava-manitra tena ilaina amin'ny traikefan'ny Multiplayer lalao. Afaka manangana vondrona misy mpilalao efatra hafa ianao mba hanao fampisehoana feno, miaraka amin'ny mpilalao tsirairay dia mandray anjara manokana amin'ny fampisehoana ankapobeny. Hisy ihany koa ny ady kilalao amponga lehibe iray, izay handefasanao andiana ganagana fingotra hanarona ny eran'ny mpifanandrina aminao mba tsy hahitany anao.
Jereo koa : Star Trek: Daty navoakan'ny Resurgence & Trailer
Ny lalana mankany amin'ny sandan'ny 60 tapitrisa dolara an'i Avril Lavigne
Young Sheldon vanim-potoana faha-6: antsipiriany tokony ho fantatrao izao!
tranokala sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet tsy misintona
baiko andian-tsarimihetsika harry potter
karatra fanomezana amazon 25 dolara maimaimpoana
mijery sarimihetsika feno halavany amin'ny Internet
inona no tokony hataoko amin'ny paosiko solosaina
horonantsary maimaim-poana amin'ny youtube amin'ny tsipika
mpilalao audio ho an'ny fisintomana maimaim-poana amin'ny android